Nhau - Sterilization yeyakagadziriswa kurongedza
Sterilization yekushandura kurongedza
Zvigadziriso zvekutakura zvigadzirwa zvinoreva kushandiswa kwemidziyo yakapfava senge yakakwira-chipinganidzo mafirimu epurasitiki kana mafirita esimbi uye mafirimu avo akaumbika kugadzira mabhegi kana mamwe maumbirwo emidziyo. Kune aseptic yekutengesa, zvakapetwa chikafu chinogona kuchengetwa pane tembiricha yemukati. Iyo yekugadzirisa musimboti uye yehunyanzvi nzira yakafanana nematare esimbi ekuchengetera chikafu. Midziyo yakajairwa yekupakata inosanganisira epurasitiki makapu uye mabhodhoro epurasitiki. Kubika mabhegi, mabhokisi, nezvimwe.
Nekuti iyo inobvumidzwa yakakosha kumanikidza mutsauko weiyo inoshanduka yekupakata zvinhu zvakanyanya kunyanya, kumanikidza kuri mumudziyo panguva yekuvharisa nzira kuri nyore kwazvo kuputika mushure mekukwira kwetembiricha. Hunhu hwehomwe yekubika ndeyekuti inotya kusimuka kwete kumanikidza; uye makapu epurasitiki nemabhodhoro ese ari maviri anotya kusimuka uye kumanikidza, saka zvinodikanwa kushandisa shanduko yekumanikidza sterilization maitiro mukuvhara. Maitiro aya anoona kuti tembiricha yekudzivirira uye kumanikidza kwedhaka zvinoda kudzorwa zvakasiyana mukugadzirwa kwekutakura zvakapfava Iyo yekudzivirira michina, senge izere mhando yemvura (yemvura yekugezera mhando), mvura yekupfapfaidza mhando (pamusoro pfapfaidzo, parutivi pfapfaidzo, yakazara pfapfaidzo), chiutsi nemhepo zvinosanganisa mhando yekudzivirira, inowanzo setwa akasiyana paramita ne PLC ye otomatiki kutonga.
Izvo zvinofanirwa kusimbiswa kuti izvo zvina zvinhu zvesimbi zvinogona kutapisa maitiro ekudzora (tembiricha yekutanga, tembiricha yekudzivirira, nguva, zvakakosha zvinhu) zvinoshandawo kune yekudzvinyirira kudzora kweyakagadziriswa zvakapakirwa chikafu, uye kumanikidza panguva yekudzivirira uye kutonhora maitiro yakanyatso kudzorwa.
Mamwe makambani anoshandisa sterilization yemhepo kune inoshanduka yekuvhara mbichana. Kuitira kudzivirira bhegi rekubika kubva pakuputika, ingoisa mweya wakatsindirwa muhari yekuvharisa mweya kuti ushandise yekumanikidza kumashure kumabhegi ekurongedza. Iyi tsika isiriyo yesainzi. Nekuti sterilization inoitwa pasi pemhepo yakachena mamiriro, kana paine mweya muhari, bhegi remhepo richaumbwa, uye mweya uyu unofamba muhari yekudzivirira kuita dzimwe nzvimbo dzinotonhora kana nzvimbo dzinotonhora, izvo zvinoita kuti tembiricha yekudzivirira isina kuenzana, zvichikonzera kushomeka kwekuvharisa zvimwe zvigadzirwa. Kana iwe uchifanira kuwedzera yakadzvanywa mweya, iwe unofanirwa kuve wakagadzirirwa nefani ine simba, uye simba reiyo fan rakanyatsogadzirirwa kubvumidza mweya wakamanikidzwa kuti umanikidzwe neanoda-simba guru pakarepo mushure mekupinda muhari. Mhepo uye kuyerera kwemhepo zvakasanganiswa, Kuti uve nechokwadi chekuti tembiricha iri muhari yekuvhara mbichana yunifomu, kuverengera chigadzirwa kutapisa.
Post nguva: Jul-30-2020